Vatongi 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
4 Ehudhi zvaakanga afa,+ vanakomana vaIsraeri vakabva vatangazve kuita zvakaipa pamberi paJehovha. 2 Naizvozvo Jehovha akavatengesera+ muruoko rwaJabhini mambo weKenani, aitonga muHazori;+ uye mukuru weuto rake aiva Sisera,+ aigara muHarosheti+ yemamwe marudzi. 3 Vanakomana vaIsraeri vakatanga kuchema kuna Jehovha,+ nokuti iye aiva nengoro dzehondo mazana mapfumbamwe dzaiva nemajeko esimbi,+ uye akadzvinyirira vanakomana vaIsraeri+ noutsinye kwemakore makumi maviri. 4 Zvino Dhibhora, muprofitakadzi,+ mudzimai waRapidhoti, akanga achitonga Israeri panguva iyoyo chaiyo. 5 Aigara pasi pomuchindwe waDhibhora pakati peRama+ neBheteri+ munzvimbo ine makomo yaEfremu; uye vanakomana vaIsraeri vaienda kwaari kunoruramisirwa. 6 Akatumira shoko, akashevedza Bheraki+ mwanakomana waAbhinoamu kubva kuKedheshi-naftari,+ akati kwaari: “Jehovha Mwari waIsraeri haana kurayira here? ‘Enda, mupararire paGomo reTabhori,+ uende nevarume zviuru gumi vevanakomana vaNaftari+ nevevanakomana vaZebhuruni.+ 7 Ndichakwevera Sisera+ mukuru weuto raJabhini+ nengoro dzake dzehondo neboka rake revanhu kwauri+ kumupata une rukova weKishoni,+ uye ndichamuisa muruoko rwako.’”+ 8 Bheraki akati kwaari: “Kana mukaenda neni, ndichaendawo; asi kana musingaendi neni, handingaendi.” 9 Iye akati: “Chokwadi ndichaenda newe. Kunyange zvakadaro, hauzokudzwi parwendo rwauri kufamba, nokuti Jehovha achatengesera Sisera muruoko rwomukadzi.”+ Dhibhora akasimuka, akaenda naBheraki kuKedheshi.+ 10 Zvino Bheraki akatanga kuunganidza Zebhuruni+ naNaftari kuKedheshi, varume zviuru gumi vakaenda vachitevera tsoka dzake;+ uye Dhibhora akaenda naye. 11 Sezvineiwo Hebheri+ muKeni akanga aparadzana nevaKeni,+ vanakomana vaHobhabhu, aiva tezvara vaMosesi,+ uye akanga adzika tende rake pedyo nomuti mukuru muZaananimu, iri kuKedheshi. 12 Vakabva vaudza Sisera kuti Bheraki mwanakomana waAbhinoamu+ akanga akwira kuGomo reTabhori.+ 13 Pakarepo Sisera akaunganidza ngoro dzake dzose dzehondo, ngoro dzehondo mazana mapfumbamwe dzaiva nemajeko esimbi,+ nevanhu vose vaaiva navo, vachibva kuHarosheti yemamwe marudzi vachienda kumupata une rukova weKishoni.+ 14 Zvino Dhibhora akati kuna Bheraki: “Simuka, nokuti nhasi ndiro zuva iro Jehovha achaisa Sisera muruoko rwako. Haasi Jehovha abuda ari pamberi pako here?”+ Bheraki akaburuka muGomo reTabhori nevarume zviuru gumi vaiva shure kwake. 15 Jehovha akatanga kuvhiringidza+ Sisera nengoro dzake dzose dzehondo uye musasa wose nomuromo webakatwa pamberi paBheraki. Sisera akazoburuka mungoro akatiza netsoka. 16 Bheraki akadzingirira+ ngoro dzehondo+ nomusasa wacho kusvikira kuHarosheti yemamwe marudzi, zvokuti musasa wose waSisera wakaurayiwa nomuromo webakatwa. Hapana kana mumwe chete akasara.+ 17 Asi Sisera+ akatiza netsoka achienda kutende raJaeri+ mudzimai waHebheri muKeni,+ nokuti paiva norugare pakati paJabhini mambo weHazori neimba yaHebheri muKeni.+ 18 Jaeri akabva abuda kunochingura Sisera, akati kwaari: “Tsaukirai kuno, ishe wangu, tsaukirai kuno kwandiri. Musatya.” Naizvozvo iye akatsaukira mutende maaiva. Gare gare akamufukidza gumbeze. 19 Kwapera nguva yakati, akati kwaari: “Ndapota, ndipewo mvura shoma yokunwa, nokuti ndine nyota.” Naizvozvo akavhura hombodo+ yomukaka, akamupa akanwa,+ achibva azomufukidza. 20 Iye akati kwaari: “Mira pasuo retende, kuti kana chero munhu upi zvake akauya akakubvunza achiti, ‘Pane murume ari pano here?’ uti, ‘Aiwa!’” 21 Zvino Jaeri mudzimai waHebheri akatora hoko yetende, akaisa nyundo muruoko rwake. Akabva aenda kwaari achinyangira, akarovera hoko yacho muzvavovo+ zvake, akaibayirira pasi, paakanga akafa nehope uye apera simba. Naizvozvo iye akafa.+ 22 Uye, tarira! Bheraki akanga achitevera Sisera. Zvino Jaeri akabuda kunomuchingura akati kwaari: “Uyai ndikuratidzei murume wamuri kutsvaka.” Naizvozvo akapinda maaiva, akaona Sisera akati rabada, afa, hoko iri muzvavovo zvake. 23 Nokudaro Mwari akakunda+ Jabhini mambo weKenani pamberi pevanakomana vaIsraeri pazuva iroro. 24 Ruoko rwevanakomana vaIsraeri rwakaramba ruchiomera Jabhini mambo weKenani,+ kusvikira vaparadza Jabhini mambo+ weKenani.